Muxuu yahay dowrka madaxweynaha Eritrea muranka wabiga…
Hogamiyaha waddanka Eritrea Isaias Afwerki ayaa muddooyinkii ugu danbeeyey la arkayey isaga oo u kala dabqaadaya Addis iyo Qaahira, inkasta oo dhan lagu tiriyo sida ay cadeeyeen ilo diblumaasiyadeed.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed, ayaa shalay ka degay magaalada Asmara, halkaas oo uu wadahadal kula leeyahay madaxweyne Eritrea Afwerki labadii sano ee la soo dhaafay ay xulufo ahaayeen.
Ujeedka ugu weyn ee shirka halkaas ka socda ayaa loo malaynayaa howl la xiriirta muranka webiga Niil ee waddammo badan oo reer galbeed daawadiisa heli waayeen.
“Eritrea in dhinaca Masar ay u janjeerto ayaa la qorayaa, weliba wargeysyada Carabtu ay sheegayaan. Tan labaad Eritrea aad iyo aad ayey ugu tiirsantahay mucaawanada ay dalalka Khaliijku bixiyaan, kuwaas oo haatan aad u dabataagan Masar,” ayuu yiri Faysal Rooble oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika lana hadlay BBC.
Falanqeeyayaal ayaa u arka biyaha niilka, miino muddaysan, oo mar uun Geeska Afrika ku qarxi doonta hadii ay sii socdaan khilaafyada labada dhinac ee awooda milati leh.
Dalal badan oo Reer Galbeed ah oo uu Maraykanku ugu tun weyn yahay ayaa dhawr jeer isku deyey inay xal u helaan muranka, hasayeeshee dedaalladaas ayaanan wax natiijo ah laga gaarin.
axadle 3882 posts